नेकपाले बोलायो शुक्रबार सचिवालय बैठक, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगायत एजेन्डा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
नेकपाले बोलायो शुक्रबार सचिवालय बैठक, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगायत एजेन्डा
भाद्र ३१, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे नेकपाको जनवर्गीय संगठनको कार्यालय कोटेश्वर पेरिसडाँडामा बस्ने सूचना आएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
बुधबार दिउँसो अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको छलफलपछि सचिवालय बैठक तय भएको हो । ती सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा सुझाव र सांगठनिक एकीकरणका बाँकी काम छलफलका एजेन्डा रहेका छन् । भदौ २६ मा सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले असोज महिनाभित्र एकीकरणका बाँकी काम टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी एकताको २८ महिनापछि तत्कालीन माओवादीको पार्टी कार्यालय रहेको पेरिसडाँडामा पहिलो पटक सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । भदौ ९ मा सचिवालय बैठक नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा दाहालको अध्यक्षतामा बसेको थियो । त्यसबाहेक सचिवालयका सबै बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्दै आएका थिए । पेरिसडाँडामा रहेको कार्यालयमा पनि दुई अध्यक्षका लागि कार्यकक्ष रहेका छन् ।
अध्यक्ष दाहाल बेलाबेला त्यहाँ पुगे पनि अर्का अध्यक्ष ओली भने पार्टी एकता घोषणा हुँदाको दिनबाहेक पेरिसडाँडा पुगेका थिएनन् ।
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १८:३७
शवबाट नमुना निकालेर पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्दैन : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौँ — शंकास्पद मृत्यु भएकाको नमुना निकालेर पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले कोरोना परीक्षण सम्बन्धमा शवबाट नमूना निकाली पीसीआर परीक्षण नगर्ने र नगराउने निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाएर दाहंसस्कार गर्ने र निजको सम्पर्कमा आएकाहरु अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताए । उनले यससम्बन्धी निर्देशिका परिमार्जन गर्दै लैजाने जानकारी गराए ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले सबै प्रयोगशालाले कोभिड १९ को परीक्षणका लागि लिएका नमूना नेगेटिभ नतिजा आएकाहरु १ महिना र पोजिटिभ आएकाहरु ३ महिनासम्म स्टोर गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रवक्ता डा. गौतमले पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट दिँदा सिटिभ्यालु समेत उल्लेख गरेर दिनुपर्ने प्रयोगशालालाई आग्रह गरेका छन् ।
सिटी भ्यालुले कति चक्रमा शंकास्पद नमूनाको भाइरसको अवशेष देखियो भन्ने जानकारी दिन्छ । मन्त्रालयले क्रिटिकल केयर विज्ञसहित टोली गठन गरी विभिन्न अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा दिइएको सेवाका बारे पनि अनुगमन गर्ने जनाएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७७ १७:३५
शनिबारदेखि मौसम खुल्ने सम्भावना
जोखिममा बेवास्ता, क्षतिपछि राहत
३ प्रतिशत संक्रमित गम्भीर